အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်း | Wutyee Food House
ပါမုန့် ၀က်သားကပ်ကြော် »
March 9, 2011 by chowutyee အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်း
ဒီ အင်ဒိုနီးရှားစတိုင် အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်းလေးက အရသာ စိမ့်ပြီ အလွန် စားလို့ကောင်းပါတယ်။ မနက်စာနှင့် အစာပြေစာ အဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကောက်ညှင်းကို ပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင်းထားတာမို့ ထမင်းအိုးနဲ့ ချက်တာထက် ပိုပြီ နူးအိပြီ စားလို့လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ အုန်းနို့ပါဝင်သော်လည်း မအီနေပဲ ချိုစိမ့်စိမ့် အရသာလေးကို ရရှိမှာပါ။ ချက်နည်းလေးကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်….
၁။ ကောက်ညှင်းဆန် – ၃၀၀ ဂရမ် (ရေထဲမှာ ၃နာရီကြာ စိမ်ထားပေးပါ)
မှတ်ချက် ။ ။ ၃နာရီထက် အချိန်ပို၍ မစိမ်ပါနှင့်…
၂။ Pandan flavor color – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ရောပါ)
၃။ အုန်းနို့နှစ်ဗူး (Coconut Cream) – ၁၀၀ဂရမ်
၆။ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် – လက်ဖက်ရည်ခွက် ၂လုံးစာ
၁။ ၃နာရီကြာ ရေစိမ်ထားသော ကောက်ညှင်းဆန်များကို ရေအနည်းငယ်ချန်ပြီ ကျန်ရေများကို သွန်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် Pandan flavor color ကို ကောက်ညှင်းဆန်ထဲ့ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၃။ ကောက်ညှင်းဆန်များ အစိမ်းရောင်လေးများ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ပြီလျှင် ပေါင်းအိုးထဲသို့ မထည့်မှီ အရသာအတွက် (အုန်းနို့နှစ်၊ ဆား၊ သကြား) တို့ကို ထည့်ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ ထို့နောက် ကောက်ညှင်းဆန်များကို စတီခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်၍ ပေါင်းအိုးဖြင့် မိနစ် ၃၀ခန့် ပေါင်းပေးပါ။
၅။ ကောက်ညှင်းဆန်အိလာလျှင် ပေါင်းအိုးမှ ချပြီ ငပျောရွက်များဖြင့် တြိဂံပုံသဏန်လေးများ ထုပ်ပေးပါ။
၆။ တြိဂံပုံသဏန်ထုပ်ထားသော အုန်းနို့ကောက်ညှင်းထုပ်လေးများကို ပေါင်းအိုးဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့် ထပ်ပေါင်းပေးပါ။
ရ။ နောက်ဆုံး ပေါင်းအိုးထဲမှ ပြန်ထုတ်ပြီ အပေါ်မှ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်လေးများ ဖြူးကာ အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in အင်ဒိုနီးရှား ချက်ပြုတ်နည်းများ | 18 Comments	18 Responses
on March 9, 2011 at 10:17 am | Reply hmone gyi
yummy yummy pig yay…sorry bae kha tin pay loe ma ya loe heee
haa ya par tel!!! it is really good!
on March 9, 2011 at 10:27 am | Reply Sunny
ကောက်ညှင်းကို အုန်းနို့နဲ့၊ ပုစွန်ခြောက်နဲ့ တွဲမစားဖူးဘူး.. စိတ်ဝင်စားသွားပြီ.. ကျေးဇူး မမ၀တ်ရည်..
on March 14, 2011 at 2:52 am | Reply chowutyee
Sunny yay, pls try it… It is not difficult to cook!😀
on March 9, 2011 at 11:24 am | Reply ဖြိုး
အိန္ဒိယမှာကောင်းညှင်းဆန်ရောင်းတဲ့ဆိုင် ရှိလား မသိဘူး ။သိရင်လှမ်းညွှန်ကျပါအုံးဗျာ …. ဒီလိုလေးစားချင်လို့…ဟင်းအသစ်တင်တိုင်းလာကြည့်မယ်နော် …ကျေးဇူးဗျာ.
on March 9, 2011 at 10:54 pm | Reply မိုး
ကောက်ညှင်းဆန်ကို sticky rice, sweet rice, waxy rice, botan rice, biroin chal, mochi rice, and pearl rice လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင် (သို့ ) ကုန်ခြောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ရှာကြည့်ပါ၊ ရှာလို့ မတွေ့ ရင် မေးကြည့်ပါ။
on March 14, 2011 at 2:53 am chowutyee
မိုးရေ ကူညီဖြေပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်…
on March 9, 2011 at 2:27 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
အချိုဆိုတော့ ပုဇွန်ခြောက်ထက် နို့မှုန့်လေးနဲ့ တို့စားချင်တယ်
လုပ်စားဦးမယ် ကွယ် ဒန်တန်တန်
on March 14, 2011 at 2:48 am | Reply chowutyee
တချို့က သကြားရည်လေးနဲ့ တွဲစားတယ် မချော။ အဆင်ပြေရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်…😀
on March 10, 2011 at 2:34 am | Reply ma phoo
THanks, Plz try it!!
on March 10, 2011 at 9:45 am | Reply ခင်လေးနွယ်
on March 14, 2011 at 2:51 am | Reply chowutyee
on March 13, 2011 at 2:43 am | Reply Nandar Aung
Wonderful ! Thanks for the recipe🙂
on January 19, 2012 at 12:12 pm | Reply tinzarchawsu
ကောက်ညှင်းဆန် ၃၀၀ ဂရမ်က နို့ဆီဘူးဘယ်လောက်ရှိလဲ………….
on April 13, 2012 at 10:28 am | Reply Puutuu Lay
It is good one.. Plz try it🙂